Caqabadaha ku gadaaman muddada lagu heshiiyay in doorashada dalka lagu qabto | Dhacdo
Home Wararka Maanta Caqabadaha ku gadaaman muddada lagu heshiiyay in doorashada dalka lagu qabto
Iyadoo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumadda iyo Madaxda Dowladda Goboleedyada ay ku heshiiyeen in muddo lixdan cisho ahi lagu qabto doorashada dalka ayaa waxaa jira caqabado muuqdo oo doorashada dib uga dhigi kara xilligeeda.
Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa 27-kii bishii hore ee May qalinka ku duugay shan qodob oo heshiiskaasi muhiim u ahaa, waxaadna mooddaa in mid ka mida qodobadaasi la soo dhameystiray, waana qodobka tubta xalinta cabashada la xiriirta Guddiyada Doorashooyinka ee Heer Federaal iyo Heer Dowlad Goboleed, oo ay Dowlad Goboleedyada soo dhameystireen xubnihii la bedelay, waxaana harsan afartii qodob ee kale, oo mid kastaana uu waqtigeeda qaadan karo.
Qodobadaas oo kii ugu horeeyay uu dhowr iyo labaatan maalmood qaatay ayaa waxay su’aal ka taagan tahay in maalmaha harsan ay qodobada kale ku qabsoomi karaan iyo in kale.
Dadka u dhuunduleela arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa waxay qabaan in maalmaha ka harsan lixdankaasi cisho aan dalka looga qaban karin doorashadii lagu ballamay.
Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya ayaa ka mid ah siyaasiyiinta qaba inaanan lixdankaasi maalmood lagu qaban karin doorashada, inkastoo uu isagu arrimo kale u sababeeyay.
“Horta waan idin saxayaayee doorasho maahanee waa xulasho bahashaan. Xulasho qabyaaladeed oo qabiileysan weeye, qabiilkana laguma kala baxo oo soddon sanaa sida awr dabada iyo kan ugu horeeyo leeskugu xiray iskaga daba gaaf-wareegeynay.” Ayuu yiri Xildhibaan Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi.
Xildhibaanka oo ka qayb qaadanayay Barnaamijka ‘Waxa ay ila tahay’ ayaa tilmaamay inaanay muuqan muddada lagu ballamay in dalka looga qaban karo doorashadaasi.
“Ma muuqato inay hirgelayso, arrintaasina waa arrin lugooyo ku ah dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed, oo dowladnimadiibaa khatar ku jirto.” Ayuu yiri Xildhibaanku.
Xildhibaanka ayaa yiri “Waxaa laga leexday jidkii saxda ahaa oo ahaa in doorasho qof & coda iyo xisbiyo la aado, iyadoo laga baqayo haddii arrintaasi ay dhacdo, ragga kan hadda dhowrka ahoo ee howshaan wada ee Dowladda Dhexe iyo Dowlad Goboleedyada madaxda ka ah in nin walba wixii uu rabay uu ka waayo halkaasi.”
Isagoo hdalkiisa sii wata ayuu yiri “Nidaamkii ay noo sheegeen Guddiga Madaxabannaan Doorashooyinka ee Gudoomiyaha ka tahay Xaliimo Yarey, markii ay hortimid Baarlamaanka sanadkii hore, bishii August waxay tiri waxaa lagu qaban karaa doorasho qof iyo cod ah bisha March. Maanta Baarlamaan iyo Madaxweyne la doortay baa jiri lahaa, haddana ma muuqato inay hirgelayso.”
Qodobada ay suurtagalka tahay inay waqti badan qaadan karaan ayaa waxaa ka mid ah hannaanka xalinta khilaafaadka Gobolka Gedo, xal u helidda Guddiga Maamulka Doorashada ee Xildhibaanada Gobolada Waqooyi iyo arrinta qoondada haweenka.
Previous articleWasiir Alcadaala oo gaaray Magaalada Gaalkacyo (SAWIRRO)
Next articleBooqashada Lafta-gareen degmada go’doonsan ee Waajid (SAWIRRO)